Madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo gaaray magaalada Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynayaasha maamul goboleedyada oo gaaray magaalada Baydhabo
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo garoonka diyaaradaha Baydhabo ku soo dhaweynaya madaxweynaha Puntlabd Cabdiweli Maxamed Cali. [Sawirka]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta oo Axad ah gaaray magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxwenayaasha Puntland, Jubbaland, Hir-shabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo martigeliye ah ayaa la filayaa in beri oo Isniin ah uu shir uga furmo halkaas.
May 17, 2018 Madaxweyne Cabdiweli oo sheegay in dhulkooda ay difaacan doonaan
July 23, 2018 Madaxweyne Cabdiweli oo Garoowe ku soo laabtay
Jowhar-(Puntland Mirror) Maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabelle ayaa maanta oo Sabti ah doortay madaxweyne cusub kadib markii baarlamaanka uu eryay madaxweynihii hore bishii lasoo dhaafay. Hoggaamiyaha cusub waa Maxamed Cabdi Waare, oo ah siyaasi khabiir [...]